Iimfihlakalo zeRosari Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Njengoko sele sazi, irosari Inothotho lweemfihlakalo, ezingamashumi amabini zizonke. Ezi mfihlakalo zibalisa ngobomi bukaYesu Krestu neNtombikazi enguMariya. Ke ngoko, ngale bhlog intsha, siza kukubonisa ifayile ye- Iimfihlakalo zeRosari.
1 Ziziphi iimfihlakalo zerosari?
1.2 Ziyintoni na?
1.2.1 Iimfihlelo ezivuyayo
1.2.1.1 Imfihlakalo yesiBini evuyayo: "Ukutyelelwa kweNtombi yethu uMariya kuMzala wakhe iVirgin Elizabeth"
1.2.1.2 Uvuyo lwesithathu oluyimfihlakalo: "Ukuzalwa koNyana kaThixo eBhetelehem"
1.2.1.3 Imfihlakalo yesine evuyisayo: "Ukunikezelwa kukaYesu etempileni"
1.2.1.4 Imfihlakalo yesihlanu yovuyo: "Umntwana uYesu ulahlekile wafunyanwa etempileni"
1.2.2.1 Imfihlakalo yesibini ekhanyayo: "Umtshato eKhana"
1.2.3 Iimfihlakalo ezibuhlungu
1.2.4 Iimfihlakalo ezizukileyo
Ziziphi iimfihlakalo zerosari?
Ngaphambi kokungena kwesihloko esiphambili seli nqaku, kubalulekile ukwazi intsingiselo yegama iRosari. Ingumxholo ovela kwisiLatin "Rosarĭum", imihle iqhele ukusetyenziselwa ukubiza uhlobo lomthandazo owenziwa ngamaKatolika, kwaye yenziwe ngezinto, ezenziwa ngamaso ukuze zikwazi ukuvelisa umthandazo ofanayo. Irosari inokukhumbula kwaye ichaze iimfihlelo ezahlukeneyo zobomi beNtombikazi kaMariya neyeNkosi yethu uYesu Kristu.
Iimfihlakalo zeRosari, luthotho lwezinto zokumisa, apho kusenziwa umthandazo, ngasinye sezikhululo sixelelwa ngokuthe ngqo ngobomi beNkosi yethu uYesu Krestu kunye nonina oyiNtombikazi uMariya.
Ngombulelo kubo, sinokubazi ubomi bakhe, ukuqala ekuzalweni, ekubingeleleni, ekunyangeni, nasekubeni wabethelelwa emnqamlezweni, wangcwatywa, naxa wayevuka kwabafileyo.
Ukubaluleka kweRosari kubaluleke kakhulu, kuba ibonisa njengendlela yokuthandaza, iirhasi ezazinikelwa kunina kaYesu, iNtombi Enyulu uMariya. Ngemfihlelo, uKrestu usifundisa ngendlela ekhethekileyo ukuba alukhanyiselo lwethu el mundoYiyo loo nto kwivesi kaJohn 9 - 5 kuvezwa oku kulandelayo: "Ngelixa ndisehlabathini, ndiyakuba lukhanyiso lwakho."
Iimfihlakalo zeRosari zingamashumi amabini (20) kwaye ziyaqondwa ngolu hlobo lulandelayo:
Uvuyo (ngoMvulo nangoMgqibelo).
Ubuhlungu (Lwesibini nangoLwesihlanu).
Imfihlelo yokuqala evuyisayo ichaza "ukuzalwa kwakhona koNyana kaThixo."
«Ngenyanga yesithandathu, ingelosi uGabriyeli yathunyelwa nguThixo kwisixeko saseGalili, esibizwa ngokuba yiNazarete, ukuba sitshate isinqandamathe esinguMariya nendoda egama linguYosefu, eyayiyintsapho kaDavide; kungoko igama lomtshakazi lithathwa njengeNtombikazi enguMariya.
Imfihlakalo yesiBini evuyayo: "Ukutyelelwa kweNtombi yethu uMariya kuMzala wakhe iVirgin Elizabeth"
Ngelo xesha uMariya wemka, waya entabeni, wafika kwidolophu ekuthiwa yiYuda. Ngena endlwini kaZakariya ubulise uIsabel. Kwathi nje ukuba uElizabhete ave ukubulisa kukaMariya, umntwana osesiswini wachukumiseka kwaye uElizabethe wazaliswa nguMoya oyiNgcwele. Wadanduluka: "Usikelelwe wena phakathi kwabafazi, sinentsikelelo nesiqhamo esisizalweni sakho uYesu."
Uvuyo lwesithathu oluyimfihlakalo: "Ukuzalwa koNyana kaThixo eBhetelehem"
«Kuyenzeka ukuba ngezo ntsuku, uKumkani uKesare Agasto, achaze ummiselo apho kwakufuneka wonke umntu abhalise. Ingxelo yokuqala yenzeka xa, irhuluneli uCirino yaseSyria, yasasaza kuyo yonke into ekwisixeko sayo. UYosefu wenyuka ukusuka eGalili esiya eNazarete, ukusuka apho waya kwelakwaJuda, esixekweni saseBhetelehem apho uDavide wayekunye nosapho lwakhe noMariya. Ngale ndlela, ukuze utshate naye, owayekhulelwe.
Ngelo xesha xa babe eBhetelehem, ixesha lokukhulelwa lazaliseka, awathi ngalo wazala unyana wakhe wamazibulo. UMariya wamsongela eziqhiyeni waza wamlalisa emkhumbini owawulapho, kuba ngelo xesha babengenandawo yokuhlala.
Imfihlakalo yesine evuyisayo: "Ukunikezelwa kukaYesu etempileni"
Kwiintsuku ezisibhozo emva kokuba egqibile ukwaluka, wathiywa igama lokuba nguYesu, kanye njengaxa ingelosi yambizayo ngaphambi kokuba akhawulwe esibelekweni. Ngokomthetho kaMoses, emva kokuphela kosuku lokuhlanjululwa kwabo, bamthatha uYesu bamsa eJerusalem, bammisa phambi koYehova, njengoko wabhalayo emthethweni wakhe: Wonke unyana omdala kufuneka azinikele kuYehova abe lidini, amahobe amabini okanye amahobe. '
Imfihlakalo yesihlanu yovuyo: "Umntwana uYesu ulahlekile wafunyanwa etempileni"
«Njengesiqhelo, uMary noJoseph babedla ngokuya kwimithendeleko yePasika. Ngeminyaka eyi-12 uYesu, wayehleli kwisixeko saseYerusalem engazi nto ngabazali bakhe. Emva kweentsuku ezintathu (ezintathu) zidlulile, bamfumana etempileni ethetha kwaye emanyelwe ngootitshala, abambuza ngamabali akhe ».
Kwimfihlakalo yokuqala ekhanyayo siya kufumana "Ubhaptizo eYordan."
«Emva kokuba ebhaptize uYesu, waphuma emanzini kwaye ngalo mzuzu, lavuleka izulu kwaza kwafika uMoya oyiNgcwele, owathi wehla wamela ihobe. Kusezulwini kunokuvakala oku kulandelayo: "Lo ngunyana wam endimthandayo, endikonwabeleyo ukumazisa kuwe."
Imfihlakalo yesibini ekhanyayo: "Umtshato eKhana"
Emva kweentsuku ezi-3 (ezintathu) zidlulile, kubhiyozelwa umtshato weNtombikazi enguMariya noJoseph, apho uYesu wamenywa khona nomfundi wakhe ngamnye. Kulo mbhiyozo, uMariya wathi kuYesu: "Akusekho wayini" kwaye uYesu waphendula wathi: "Alikafiki ilixa lam." Emva koko uMariya wathi kubo bonke abakhonzi: "Nenzani nantoni na anixelela yona".
Okokugqibela, ilandelwa yimfihlakalo yesithathu okanye ukubhengezwa koBukumkani bukaThixo, okwesine, okuhambelana nokuGuqulwa kukaYesu kunye nokwesihlanu, okunento yokwenza neZiko le-Ekaristi.
Kwindawo yokuqala, singangqina kwiMfihlakalo ebuhlungu yokuqala umthandazo osegadini. Oku kulandelwa kukuhlanjwa kukaKristu kubotshelelwe kwikholamu, Ukuthwesa isithsaba ngameva, ukuhamba kukaKristu nomnqamlezo emagxeni akhe nokubethelelwa emnqamlezweni.
Ngawo siqala ngala: "Uvuko loNyana kaThixo." Siyaqhubeka nokunyukela kwakhe ezulwini, ukufika koMoya oyiNgcwele, ukucinga kweNtombikazi kwaye siyayivala ngokuthweswa isithsaba sokumkanikazi kunye nenkosikazi yabo bonke.
Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nesihloko, simema ukuba undwendwele igolide kumanqaku akwiBhlog yethu Umthandazo kuMama oMnandi. Kwakhona, wonwabele ividiyo esikushiyela yona ngezantsi.